ख्रीष्टको रहस्य। BNL Ministries - ne00
हामी मात्र यो धर्मशास्त्रको अर्थ के महसुस सक्छ भने: हामी यो सत्य हो थाहा '। महान् उहाँले कि दुनिया मा छ भन्दा तपाईं मा छ कि छ', तर हामी साँच्चै यो बुझ्दैनन्। कि बढी छ तपाईं के छ? यो ख्रीष्ट, अभिषिक्त हो! ख्रीष्टमा थियो जो परमेश्वर, तपाईं मा छ। उहाँले तपाईं मा छ भने, तब यो तपाईं उसलाई तपाईं बस्ने हो, कुनै पनि अधिक जीवित छैन।
उत्पत्ति 14 सदोम शहर एलाम (फारसी) को राजाले चाँहि अँगार थियो बताउँछन्। लूत र तिनको पत्नी र छोराछोरी कब्जा र उत्तर लगिए। अब्राहाम एलाम राजा पछि लागे र युद्धमा उसलाई परास्त गर्ने 318 पुरुष को एक लडिरहेका शक्ति भेला। यसरी अब्राहाम दासत्वबाट आफ्नो भतिजा लूतलाई उद्धार। युद्ध पछि, मल्कीसेदेक नाम पूजाहारी, अब्राहाम आए तिनलाई आशिष् दिनुभयो र त्यसपछि रोटी खाए र उहाँसित रक्सी पिए। बदलामा, अब्राहामले तिनलाई थियो सबै को एक दशौं दिन, मल्कीसेदेक गर्न दशांश भुक्तानी।
यो कथा मात्र उत्पत्ति खाता देखि पर्याप्त रहस्यमय हुनेछ, तर हिब्रू7मा पावलले मल्कीसेदेक शान्ति र धार्मिकताको राजा हो भनेर लेख्छन्, र तिनले बुबा वा आमा, न शुरुवात न त दिन को अन्त्य थिएन। यस रहस्यमय व्यक्ति को हो? भाइ Branham, मल्कीसेदेक मात्र परमेश्वरको शुरुआत थिएन किनभने, परमेश्वर आफैले हुन भनी बताए। मल्कीसेदेक येशू ख्रीष्ट-आंकडा पूर्व गर्न अब्राहाम देखापर्ने परमेश्वरको theophany थियो। हामी नयाँ नियममा उहाँलाई देख्न जस्तै येशू बुबा र आमा, किनभने यो, येशूले थिएन र यो मानिस न थियो। येशूको सुरुवात थियो; यो मानिस गरे। येशूले आफ्नो जीवन दिनुभयो; त्यो जीवन थियो किनभने यो मानिस, सकेनन्।
डाउनलोड। ( अंग्रेजी। )
तिनीहरूले हाम्रो बाइबल रूपमा चिनिने पुस्तकहरू गनर्को थिए जब अनुवादक, लगभग रूथको पुस्तक बाहिर छोडेर। यो प्रेम कथा हो, र धेरै सुन्दर छ, तर परमेश्वरले शायद उल्लेख गरिएको छ। यो झन्डै प्रेरित रूपमा यस पुस्तकको अस्वीकार गर्न तिनीहरूलाई कारण यो वास्तवमा थियो। यो 'प्रकार' एक नातेदारले उद्धारकर्ता को कथा मा पाइन्छ तर, येशू ख्रीष्ट (यहूदी चर्च प्रतिनिधित्व गर्ने) नाओमी उद्धार गर्न मूल्य तिर्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो, जो हाम्रो 'निकट नातेदार' भएर र यसो रूथको (एक नास्तिक दुलही) हुन्छ जसले चर्चको प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी यो एक जस्तै एक उद्धारकर्ता छ कि परमेश्वरले धन्यवाद। रूथ विवाह को कलंक छैन गर्न उद्धार गर्न दिएका एक नजिक नातेदारले (हाम्रो पुरानो स्वभाव) थियो। यो उहाँको दुलही उद्धार गर्न स्वतन्त्र हाम्रो बोअज (ख्रीष्ट) छोडे। उहाँले हाम्रो नातेदारले हुन सक्छ भनेर ख्रीष्ट 'एक स्त्रीबाट जन्मेको' गर्नुपर्ने थियो कारण छ।
डाउनलोड। ( अंग्रेजी। ) Kinsman Redeemer
परमेश्वरले ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्दा उहाँले मन मा एक तीनवटा उद्देश्य थियो। पहिलो, उहाँले आफ्ना गुणहरू व्यक्त मानिसहरूलाई आफूलाई प्रकट गर्न चाहन्थे। उहाँले सबै ठाउँ, समय, र अनन्तसम्म कवर यहोवा परमेश्वरको रूपमा यो गर्न सकेन। उहाँले कुनै पनि कहिल्यै उहाँलाई बुझ्न सकून् भनेर गहिरो र रहस्यमय छ। कसरी तिनीहरू सधैं अस्तित्वमा एक उम्मेदवार बुझ्न सक्छ? त्यसैले, उहाँले मानिसको छोरा बनेर आफ्नो पिता व्यक्त गरे। येशूले आफूलाई भन्नुको छ "मानिसको पुत्र।" परमेश्वरले ख्रीष्ट आफूलाई प्रकट गरेर मानव जात संग आफूलाई पहिचान गर्न चाहन्थे।
परमेश्वरले मानिसहरूलाई बस्ने, र यसरी उसले आफ्नो दुलही भनिएको विश्वासीहरूको शरीरमा मा स्थानको गर्न चाहन्थे। सुरुमा आदम र हव्वाले मा यो गर्न सक्छ; तर त्यसपछि पाप आफ्नो उपस्थिति देखि अलग गर्नुभयो। किन परमेश्वरले आदम र हव्वालाई शुद्ध पालन गरेनन्? त्यो थियो भने, तिनले आफ्नो पूर्ण विशेषताहरु व्यक्त गरेका कहिल्यै सक्छ। उहाँले मात्र ख्रीष्टमार्फत व्यक्त सक्ने एक छोरा, एक उद्धारकर्ता, र एक आरोग्य, थियो। हेर्नुहोस्? सबै कुराहरू एक व्यक्ति, येशू ख्रीष्ट मा घाउ छन्। परमेश्वरको महान् उद्देश्य सधैं आफूलाई प्रकट भएको छ - त्रीएक परमेश्वरभन्दा शारीरिक को पूर्णता रूपमा ख्रीष्टको मा पहिलो; र त्यसपछि एक मान्छे मा ख्रीष्टको पवित्र आत्मा थाल्नेहरूले गर्ने। यी विशेष मानिसहरू आफ्नो जीवनमा येशू ख्रीष्ट सर्वोत्कृष्ट बनाउन हुनेछ। शुरुवात देखि परमेश्वरले यो लक्ष्य हासिल दिनरात काम गरेको छ, त्यसैले उहाँ येशू ख्रीष्ट स्थानको दिनेछु जो मानिसहरू महिमा गर्न सकिन्छ; भन्ने स्थिति माथि वा सबै अरूलाई अघि, छ।
तेश्रो, परमेश्वरको उद्देश्य आदम र हव्वाले पतन अघि गरे जस्तै आफ्नो मान्छे, साँझ को चिसो मा फेरि हिंड्न सकोस्, अदनको बगैंचामा आफ्नो राज्य पुनर्स्थापना छ। यो अन्त गर्न, परमेश्वर पिता, एक छोरा र एक पवित्र आत्माको रूपमा उमेरका मार्फत आफूलाई व्यक्त गरेको छ। बाबु र पवित्र आत्माको नै आत्मा हो। तपाईं भेटिन्छ? यो तीन देवताहरूको होइन; यो तीन विशेषताहरु आफूलाई व्यक्त एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्रीएक परमेश्वरभन्दा शारीरिक को पूर्णता - परमेश्वरले बुबा, छोरा र पवित्र आत्माको थियो जो येशू ख्रीष्ट, आफूलाई व्यक्त गरे। अब त्रीएक को पूर्णता शारीरिक आफ्नो मण्डली (आफ्नो दुलही) मा बास, र तिनले उसलाई स्थानको दिन्छ। सबै परमेश्वरले थियो कि, तिनले ख्रीष्टको छिरेको; र सबै ख्रीष्टको उहाँले आफ्नो चर्च मा खन्याइदिएकी थिइन्, छ (व्यक्तिगत विश्वासीहरूलाई।)
येशूले - एक बोली जन्म।
येशूले भन्नुभएका-शब्द बच्चा थियो। उहाँले एक यौन क्रियाकलाप मार्फत गर्भधारण गरिन्, तर परमेश्वरको बोल्ने शब्द माध्यम थिएन। (भित्र मरियमको गर्भमा परमेश्वरले यति आनुवंशिक उहाँ मानव थियो, अन्डा र अन्डा निषेचित कि शुक्राणु दुवै सृष्टि, तर मूलका आफ्नो लाइन कडाई ईश्वरीय थियो।), येशू मर्न थिएन त्यो सेक्स को माध्यम ले आ नभएकोले ; तर उहाँले आदमको पापको ऋण तिर्न गर्न मर्न गर्नुभयो। कि यो भुक्तानी सक्थ्यो मात्र बाटो हो। अरू सबैको यौन जन्म भएको थियो किनभने अरू कसैले, यो गर्न सक्छ। मरियमले जस्तै, येशू ख्रीष्टको सामूहिक दुलहीको भाग हुन अघिबाटै छन् मानिसहरूको पहिलो आफ्नो मन को गर्भमा वचन प्राप्त हुनेछ।
डाउनलोड। ( अंग्रेजी। ) Mary's Belief
सम्बन्धित सन्देशहरू डाउनलोड।
यो गोप्य सत्य शुरूदेखि नै सबै मानिसहरूबाट लुकाएको थियो। तर अब परमेश्वरको पवित्र जनलाई यो गोप्य सत्य प्रकट गराइएको छ।
त्यो धनी र महिमामयी सत्य आफ्ना मानिसले जानुन् भन्ने निश्चय परमेश्वरले गर्नुभयो। त्यो महान सत्य सबै जातिहरूको लागि हो। अनि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ ख्रीष्ट स्वयं, जो तिमीहरू सबैमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमामा भागीदारी हुनु उहाँ हाम्रो एक आशा हुनुहुन्छ।
एक पहाडमा चीन मा हिउँ मा जङ्गलमा गुलाब र।
उहाँले म हुँ छ।
ख्रीष्ट। सुनको मोमबत्ती छडी मा।
उहाँले अझै पनि पानी छेउमा मलाई जान्छ।
साँझ समय मा यो ज्योति हुनेछ।